Shirkada Qaran iyo habka Zaad ee lacagta la isugu diro - BBC Somali
Shirkada Qaran iyo habka Zaad ee lacagta la isugu diro
Image caption Gudoomiye ku xigeenka Qaran Maxamuud Axmed Liibaan
Shirkadda xawaalada Qaran iyo shirkadaha isgaarsiinta ee Telesom, Hormoud iyo Golis ayaa marklii ugu horaysay bilaabay hab loo yaqaano Zaad oo lacagta telephoneka mobileka la isugu diro.
Qofka Soomaaliya joogo waxaa laga rabaa inuu telephone Mobile uu leeyahay oo uu ka haysto shirkadaha Hormuud ,Telsom iyo Golis.
Kadib qofka wuxuu wacayaa shirkadaha telephoneka oo uu waydiisanayaa in loo furo acccount lacag la dhigto oo habka Zaad ku shaqeeya.
Markii accounka loo furo qofka, waxaa la sinayaa numbar accounkiisa iyo number sir ah oo uu ku galo accounka ay lacagta ugu soo dhacday.
Lacagta loo soo diro qofka waxay ugu dhacaysaa mobilka, kadib qofka halkaas ayuu lacagta ka maamulanayaa isagoon u baahan qofka inuu lacagta ka doonto xawaalada.
Qofka lacagta mobilka ay ugu jirto tukaamada isticmaala habka Zaad ayuu wax uga gadan karaa, sidoo kale qofka lacag ayuu qof kale uga diri karaa Mobilekiisa hadii ay labada qof ay leeyihiin habka Zaad.
Qofka haduu lacag cadaan ah u baahdo wuxuu lacagta ka qaadan karaa xawaalada qaran, shirkadiisa telefoonka iyo tukaamada.
Habkan cusub ee Zaad ayaan ka waraysanay gudoomiye ku xigeenka guud ee xawaaladda Qaran maxamuud Axmed Liibaan.
Iskaashatada kalluumeysiga ee xarunteedu tahay magaalada Berbera, ayaa waxay carwada ganacsiga ee ka socota Hargeysa ku soo bandhigeen qalabka kalluumeysiga, tababar, iyo suuqyada ganacsiga kalluunka ay soo qabtaan u iibgeeyaan.
Gudoomiyaha Iskaashatada Axmed Xassan Cali ayaan ka waraysanay ganacsiga kalluumaysatada